Missha All Around Safe Block Water Proof Sun SPF50+ PA++++ - водостойкий солнцезащитный крем для тела - Hollyshop.ru
Солнцезащитный крем для лица и тела Missha All Around Safe Block Water Proof Sun прекрасно подойдет для любителей активного вида отдыха на пляже или в водоёме, благодаря своей водоотталкивающей функции. Средство обладает высокой степенью защиты от солнечных лучей (SPF50+), которая позволяет находиться длительное время под палящим солнцем. Крем оказывает увлажняющее и успокаивающее действие, защищает кожу от фотостарения. Средство можно использовать как за уходом кожей лица, так и тела. Подойдет для всех типов кожи, даже для самой чувствительной и сухой кожи.
Солнцезащитный крем для тела Missha All Around Safe Block Water Proof Sun активно защищает кожу лица и тела от негативного воздействия солнечных лучей, защищает от фотостарения, а также обладает сильным водостойким эффектом. Крем прекрасно подойдет для тех, кто любит активный вид отдыха под палящим солнцем. Средство способно противостоять влаге, поту, кожному жиру и недолгому пребыванию в воде. Имеет высокую степень защиты от агрессивных УФ-лучей (SPF50+), благодаря которой можно длительное время находиться на открытом солнце. Мощная блокировка образует некий барьер, который будет отражать UVA и UVB лучи.
Крем хорошо питает и увлажняет кожу, оказывает смягчающий и успокаивающий эффект. Обладает антиоксидантным действием и предупреждает появление ранних морщинок, а также пигментации.
Запатентованный компонент «Oriental Tea Newplex», состоящий из 7 видов восточных чаев обеспечивает мощную защиту, одновременно увлажняя и питая кожу. Двухслойная система блокировки УФ лучей позволяет создавать более мощную и длительную защиту от солнца, предупреждая обгорание кожи.
Экстракты портулака и хризантемы обладают мощным антиоксидантным свойством. Бережно успокаивают и убирают воспаления на коже. Предупреждают преждевременное старение клеток кожи и улучшают циркуляцию крови.
Экстракт листьев алоэ оказывает антибактериальное, заживляющее, тонизирующее действие. Обладает антиоксидантным эффектом.
Экстракт камелии глубоко проникает в кожу, уменьшает потери влаги и усиливает защитные функции эпидермиса. Хорошо питает обезвоженную и сухую кожу, дарит ощущение упругости на долгое время. Экстракт уменьшает пигментацию, разглаживает мелкие морщинки, оказывает тонизирующий эффект.
Экстракт глициновой сои и женьшеня восстанавливают структуру эпидермиса и оказываютт подтягивающий эффект на кожу. Отлично её смягчают, увлажняют и предотвращает потерю влаги.
Экстракт гамамелиса оказывает вяжущее, тонизирующее и антиоксидантное действие. Имеет сужающее действие на сосуды и уменьшает секрецию сальных желез.
Экстракт розмарина увеличивает защитные и увлажняющие свойства крема. Обладает бактерицидным, дезинфицирующем и противогрибковым свойством.
Арбутин и экстракт огурца имеют отбеливающий эффект. Компоненты защищают кожу от УФ-излучения, убирают отечность и оказывают обезболивающее действие.
Подходит для всех типов кожи, даже для самой чувствительной и сухой кожи.
Способ применения: Используйте утром на последнем шаге ухода за кожей лица и тела. Выдавите необходимое количество средства на пальцы и равномерно нанесите на кожу, дайте впитаться. Особое внимание уделите наиболее "нежным" местам, которые быстро обгорают: области под глазами, вокруг скул, нос и лоб.
Тип кожи для всех типов кожи, для жирной и комбинированной кожи, для сухой кожи, для чувствительной кожи
<p style="text-align: justify;"> <span style="color: #000000; font-size: 12pt;">Солнцезащитный крем для тела </span><b><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">Missha All Around Safe Block Water Proof Sun </span></b><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">активно защищает кожу лица и тела от негативного воздействия солнечных лучей, защищает от фотостарения, а также обладает сильным водостойким эффектом.</span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> Крем прекрасно подойдет для тех, кто любит активный вид отдыха под палящим солнцем. Средство способно противостоять влаге, поту, кожному жиру и недолгому пребыванию в воде. Имеет высокую степень защиты от агрессивных УФ-лучей (SPF50+), благодаря которой можно длительное время находиться на открытом солнце. Мощная блокировка образует некий барьер, который будет отражать UVA и UVB лучи. </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> </p> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> <blockquote> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> </p> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><img width="500" alt="Влагостойкий санскрин" src="/upload/medialibrary/b77/b778607a4ed911eaef8cd9988f073282.JPG" height="230" title="Влагостойкий санскрин" align="middle"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> </blockquote> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000;"><br> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span></span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> </p> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> Крем хорошо питает и увлажняет кожу</span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">, оказывает смягчающий и успокаивающий эффект. Обладает антиоксидантным действием и предупреждает появление ранних морщинок, а также пигментации.</span><br> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> </p> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><b><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">Основные действующие компоненты:</span></b><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> </p> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><b><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">Запатентованный компонент «Oriental Tea Newplex», </span></b><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">состоящий из 7 видов восточных чаев обеспечивает мощную защиту, одновременно увлажняя и питая кожу. Двухслойная система блокировки УФ лучей позволяет создавать более мощную и длительную защиту от солнца, предупреждая обгорание кожи.</span><b><span style="color: #000000;"><br> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span></span></b><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> </p> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><b><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">Экстракты портулака</span></b><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><b><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">и хризантемы</span></b><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> обладают мощным антиоксидантным свойством. Бережно успокаивают и убирают воспаления на коже. Предупреждают преждевременное старение клеток кожи и улучшают циркуляцию крови. </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> </p> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><b><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">Экстракт листьев алоэ</span></b><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> оказывает антибактериальное, заживляющее, тонизирующее действие. Обладает антиоксидантным эффектом. </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> </p> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><b><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">Экстракт камелии</span></b><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> глубоко проникает в кожу, уменьшает потери влаги и усиливает защитные функции эпидермиса. Хорошо питает обезвоженную и сухую кожу, дарит ощущение упругости на долгое время. Экстракт уменьшает пигментацию, разглаживает мелкие морщинки, оказывает тонизирующий эффект. </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> </p> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><b><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">Экстракт глициновой сои и женьшеня</span></b><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> восстанавливают структуру эпидермиса и оказываютт подтягивающий эффект на кожу. Отлично её смягчают, увлажняют и предотвращает потерю влаги. </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> </p> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><b><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">Экстракт гамамелиса</span></b><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> оказывает вяжущее, тонизирующее и антиоксидантное действие. Имеет сужающее действие на сосуды и уменьшает секрецию сальных желез. </span><br> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> </p> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><b><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">Пантенол</span></b><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> обладает заживляющим, увлажняющим и разглаживающим действием. </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> </p> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><b><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">Экстракт розмарина</span></b><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> увеличивает защитные и увлажняющие свойства крема. Обладает бактерицидным, дезинфицирующем и противогрибковым свойством. </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> </p> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><b><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">Арбутин и экстракт огурца </span></b><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">имеют отбеливающий эффект. Компоненты защищают кожу от УФ-излучения, убирают отечность и оказывают обезболивающее действие. </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> </p> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><br> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> </p> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><img width="750" alt="Ингредиенты " src="/upload/medialibrary/24e/24ed350432d7eb64addb300f411d483b.jpg" height="111" title="Ингредиенты "><br> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> </p> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><br> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> </p> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><b><i><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">Солнцезащитный фактор: SPF50+.</span></i></b><br> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><br> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><i><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> Подходит для всех типов кожи, </span></i><span style="color: #000000;"><i><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">даже для самой чувствительной и сухой кожи.</span></i></span><span style="color: #000000;"><i><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span></i></span><br> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><br> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> Способ применения: Используйте утром на последнем шаге ухода за кожей лица и тела. Выдавите необходимое количество средства на пальцы и равномерно нанесите на кожу, дайте впитаться. Особое внимание уделите наиболее "нежным" местам, которые быстро обгорают: области под глазами, вокруг скул, нос и лоб. </span><br> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><br> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> Выдавите достаточное количество крема на ладонь и массажными движениями вотрите в кожу шеи, рук, ног и т.д.</span><br> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><br> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> Наносите средство за 30 минут до выхода на солнце. За 30 минут молочко полностью впитается и будет готово защищать вашу кожу.</span><br> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><br> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> Обновляйте средство каждые 2-3 часа. Помните: максимальная активность солнца приходится на промежуток с 10:00 до 14:00. </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> </p> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> </p> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> <blockquote> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000;"><br> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span></span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> </p> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><img width="600" alt="Применение " src="/upload/medialibrary/68b/68b1ec66fe0848fc73f21d0dfb165798.JPG" height="217" title="Применение " align="middle"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> </blockquote> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 13pt;"> </span><span style="color: #000000;"> </span> <span style="font-size: 12pt;"> </span> <br>
Missha All Around Safe Block Water Proof Sun SPF50+ PA++++